ICANDELO LE-18 (ubukhulu 4 Umntu)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguThe Apartment 18
Siyavuya ukukumema kwi-APARTMENT 18 yethu.
Sibeka yonke imizamo yokwenza ukuhlala kwakho uzive ngathi usekhaya.
Siyavuya ukukhokela ukuphonononga kwakho kwesi siqithi esiphuphayo kwiparadesi - indalo ekhethekileyo ukusuka elwandle ukuya kwiindawo eziphakamileyo, ngokusebenzisa inkcubeko yekhulu leminyaka ubudala echazwe yimfihlakalo, izithethe kunye nezithethe-zonwabele konke oku ngexesha leholide yakho.
Sikhuthazwe luyilo lwemveli, senze amagumbi atofotofo kumgangatho ophucukileyo kunye nesitayile saseYurophu.
I-APARTMENT 18 imalunga nama-800 m ukusuka kulwandle olunomtsalane olunesanti oluyi-8 km ubude lolwandle lwaseBentota.
I-APARTMENT 18 ibonelela ngeeApartments ezi-2 ezintle kwiVilla epholileyo enokufikelela egadini okanye kwibalcony.
Iiflethi zokuziphekela (isidlo sakusasa kunye nenkonzo yokupheka ngesicelo) zifakwe kwindawo eshushu kwaye zenziwe ngePavilion eyongezelelweyo egadini. Ibonelela nge-Wi-Fi yasimahla kunye neyokupaka yasimahla.
I-APARTMENT 18 inezindlu ezi-2 ezahlukeneyo. Sikhuthazwe luyilo lwemveli, senze amagumbi afanelekileyo akumgangatho waseYurophu.
Malunga neemitha ezingama-500 ukusuka kude uya kufumana ivenkile enkulu, iivenkile ezincinci zentengiso, apho unokuthenga iziqhamo ezitsha, imifuno kunye neentlanzi ezintsha kubathengisi, kunye neendawo zokutyela ezahlukeneyo ziyafumaneka eBentota. Isixeko sase-Aluthgama i-1 km kunye ne-Dharga Town imalunga neekhilomitha ezi-3, apho uya kufumana ezinye iivenkile, iivenkile kunye neMarike yeMvulo eyaziwayo (iziqhamo kunye nemifuno) kunye neebhanki (oomatshini bemali). Ukuba ufika ngololiwe, kufuneka wehle kwisikhululo sikaloliwe iBentota, kuhlala kukho iiTuk-Tuks ezilinde ukuqeshwa.
I-APARTMENT 18 ikumgama weemitha ezingama-800 ukusuka elunxwemeni, yenziwe ukuba yonwabe kwaye iphumle! Iilwandle ezinde, iitempile ezininzi, iindawo zokutyela kunye neendawo zokuthenga zinokufumaneka kwindawo ekufutshane.
Zingenise kumbono wethu. Vula nje amehlo akho ngamaxesha awodwa eSri Lanka kwaye ubone indlela obumangalisayo ngayo ubomi.
Umbuki zindwendwe ngu- The Apartment 18
Sinikezela njengenkonzo eyongezelelweyo - simahla
• Inkonzo yokucoca kathathu ngeveki
• Igumbi lokuhlambela- Iitawuli
• Ukupaka entendelezweni
Sinikezela njengenkonzo eyongezelelweyo – xa uyicela
• Ukucocwa kweApartment yonke imihla
Imidlalo yaseManzini (Ukusefa, ukutyibiliza kwiJet, ukuLoba eLwandle oluNzulu, ukuloba, ukukhwela inqanawa, iSikhephe seBhanana, ukuDiving)
• Isidlo sakusasa kunye nenkonzo yokupheka eyongezelelweyo / ukutya (iBarbeque, iSidlo sokuKhanya kweKhandlela)
• Unyango & iiPakeji zokuphulula
• Inkonzo yokuThutha kwisikhululo seenqwelomoya
• Inkonzo yeTuk-Tuk
• Inkonzo yeeteksi
• Isithuthuthu siyaRentwa
• Iibhedi zelanga eBentota Beach
• Ukurenta ixesha elide
• Uhambo-iNkcubeko-Ukhenketho lokubona
Ukhenketho lwesiqingatha sosuku
(Imarike yeentlanzi, iMakethi yoMvulo, iTempile yaseKande Vihare kunye noMkhosi, iGadi emfutshane - iBevis Bawa, iGadi yaseLunuganga - uGeoffrey Bawa, iingxangxasi, iFama yeTurtle yaseKoskoda, iBentota Ganga (uMlambo) kunye neMadu Ganga (uMlambo) Tour)
Ukhenketho lwemihla ngemihla
(Ukuthenga & Ukuphila kwasebusuku e-Colombo, i-Whale Watching Mirissa, iPaki yeSizwe yaseYala, iGalle kunye ne-Unawatuna Beach) kunye
UKhenketho lweentsuku ezininzi
(ixutywe neNkcubeko, iNkolo, iNdalo, iZilwanyana zasendle, i-Adventure (i-Air-Ballooning, Water-Rafting, intaba kunye nokunye okuninzi ...)
Buza nje-siyavuya ukukunika iinkonzo ezikhethekileyo, iinkqubo kunye neepakethi zempilo yakho kunye nokuhlala ongalibalekiyo eSri Lanka.
Uyayonwabela - senza!
• Ukupaka entendelezwen…